Maskaxda Oo La Ogaaday In Xilliga Hurdada Ay Waxyaabo Badan Baran Karto Ama Xafidi Karto – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Maskaxda Oo La Ogaaday In Xilliga Hurdada Ay Waxyaabo Badan Baran Karto Ama Xafidi Karto
Published on Oct 11 2017 // Googooska Geeska
Hargeysa (Geeska)- Waxaa muddooyinkii u dambeeyeyba goleyaasha cilmiga lagu gorfeeyo ku soo noqnoqonayey doodda ay saynisyahannada qaar qabaan ee ah suurtogalnimada in maskaxda aadamhu xilliga hurdada ay hesho xogo iyo in ay xafiddo. Waxaa garab socday daraasado ay ka soo baxayso natiijo sheegaysa in akhriska ama naqtiinka marka la sii seexanayo la sameeyaa in uu ka faa’ido badan yahay waqtiyada kale oo dhan, sababta oo ah maskaxda ayaa waqtigaas si fiican u xafidi karta macluumaadka ay heshay.
Degelka Internet ka ee I believe in Science oo ka faallooda arrimaha caafimaadka ayaa warbixin uu dhowaan qoray ku sheegay in qofka oo hurda ay maskaxdu awood u leedahay in ay arrimaha qaar barato ama ugu yaraan wax ka fahanto, in kasta oo waxyaabahaas ay maskaxdu hurdada ku baran kartaa aad u kooban yihiin. Warbixin ay arrintan ka qortay shabakadda wararka ee Alcarabiya oo Geeska Afrika soo turjumay ayaa lagu sheegay qaar ka mid ah arrimahaas:
Barashada ereyada qalaad:
Saynisyahanno dhowaan tijaabo arrintan la xidhiidha sameeyey ayaa dad ku hadla afka Jarmalka waxa ay ka dalbadeen in ay bartaan afka Holaand, xilli ay hurdo isu diyaarinayeen ayaa dadkan la baray ereyo afka Holaand ah, kadibna waxaa loo qaybiyey laba kooxood waxa aana loo fasaxay in ay iska seexdaan. Markay seexdeen ayaa koox ahaan iyaga oo aan sii ogeyn waxaa agtooda laga shiday cod ku celcelinaya qaar ka mid ah ereyadii la baray, halka kooxda kale aan waxba loo shidin. Muddo kadib ayaa labadan kooxood qof qof looga qaaday tijaabo la xidhiidha barashadooda ereyadii afka Holaand ahaa ee hore loogu dhigay waxa aana soo baxday in kooxdii hurdada lagu dhegeysiiyey ereyadani ay si fiican u qaybeen una garteen ereyadii halka kooxdii kale waxba ka xasuusan weyday.
Intaas laguma deyn ee mar kale waxa ay saynisyahannadu tijaabo ahaan isu barbar dhigeen dad soo jeeda oo hawlo kale ku mashquulsan iyo dad hurda, tusaale ahaan dad jimicsi socod ah ku jira yaa loo shiday cod lagu barayo ereyo af shisheeye ah, kuwo kale oo hurdana waa loo shiday isla ereyadii, waxa aana soo baxday in kuwii hurday markii ay soo tooseen ay si fiican u garteen ereyadii hurdada loogu sheegay, halka kuwii soo jeeday ee mashquulsanaa ay xasuusan kari waayeen.
Cilmibaadhis kale ayaa ay saynisyahannadu koox dad ah waxa ay ku tababareen sida laxanka loogu garaaco giitaarka, kadib dhammaan dadkii waxaa loo fasaxay in ay seexdaan iyaga oo aan ogeyn hurdada inta ay ku jiraan waxa dhici doona, markii ay hurdadii dhammaysteen ayaana mar kale mid kasta laga qaado imtixaan lagu ogaanayo fahamkiisa tababarkii tumista giitaarka, in kasta oo ay dadku dhammaantood si fiican uga gudbeen imtixaankii arrinta xiisaha yeelatay waxa ay noqotay in qayb ka mid ah oo markii ay seexdeen iyaga oo aan dareensanayn giitaarka laga ag garaacay ay si aad ah uga xariifsanaadeen kuwii la baray balse xilligii hurdada aan loo tumin.
Cilmibaadhis la sameeyey sannadkii 2013 ayaa ay saynisyahannadu ay soo ururiyeen 60 ruux oo qaangaadh ah, dhammaantoodna xaaladdooda caafimaad fiican tahay. Kadibna kombiyuutarro ayaa loo dhiibay waxa aana mid kasta laga codsaday in uu fayl ama sawir iwm. uu dhigo meel uun shaashadda ka mid ah, markii qof kastaa uu doortay halka uu faylkaas dhigayo waxaa loo shiday muusig gaar danan gaar ah leh. Markaa kadib ayaa dadkii dhammaan la seexiyey, laakiin markii hore si caadiya ayaa ay u seexdeen, iyada oo aan wax codad ah lagu shidin. Mar dambe ayaa ay haddana seexdeen, laakiin markan dambe waxaa loo shiday muusiko ah kii ay maqleen markii ay wax dul dhigayeen shaashadda kombiyuutarka.
Natiijada soo baxday waxa ay noqotay in dadkan markii laga dalbaday in qof kastaa uu toos u abbaaro halkii uu wax dhigay ay dhammaantood maskaxdoodu waxoogaa ku jaahwareertay, laakiin iyada oo ay sidaas tahay waxaa muuqatay in kuwa codkii loo shiday markii ay hurdeen ay ka hor xasuusteen ama ugu yaraan dhaammeen kuwa kale.
Waxaa saynisyahannada u soo baxday in marka qofku uu shay meel dhigayo haddii uu cod ama dhawaq gaar ah maqlo, kadibna isaga oo hurda isla dhawaqii laga ag shido, in si dhaqso ah oo fudud u xasuusan karo shaygaas halka uu dhigay mar kasta oo dambe oo uu codkaas ama dhawaqaas maqlo.
Xusuusashada xusuuso gaar ah
Waxa ay saynisyahannadu aaminsanyihiin in maskaxdeennu ay isticmaasho nidaam-hawleed oo ku dhisan ishaarooyin gaar ah oo ay ku kala soocdo xusuusaha kuwooda muhiimka ah iyo kuwooda aan sidaas u sii ridnayn. Sidaa awgeed xusuusaha ay marka hore maskaxdu raacisdo ishaarada ah in ay muhiim yihiin, waxaa markaba loo dira maskaxda qaybteeda xusuusta fog, halka waxyaabaha ay maskaxdu marka hore u aragto in aanay muhiim ahayn, sidaa awgeedna aanay ishaarada ‘Muhiimadda’ raacin, ay dhacdo in maskaxdu meel soke ku hayso oo mar uu qofku shay kale xafido ay si sahal ah kii hore ugu dul masaxdo, sidaasna ay xusuustaasi kaga baxdo maskaxda.
Waxa ay imika saynisyahannadu aamineen in uu jiri karo hab nidaamkaas xusuuseed ee maskaxda oo isagu is dira, loogu dhex geli karo, oo tusaale ahaan, waxyaabaha qaar maskaxdu u arki lahayd wax aan sii ridnayn loogu tusayo in ay muhiimad weyn leeyihiin si aanay u illaawin.
Cilmibaadhis cusub ayaa ay saynisyahannadu ku ogaadeen in qofku haddii marka uu wax xafido ee uu seexdo loo shido laxanka ama dhawaq leh qaab-dhaca akhriska waxa uu xafidayaa leeyahay, in maskaxdu ay si fiican shaygaas u qabato, xitaa haddii aanu muhiimad sii ridan lahayn.
Archives Select Month September 2018 (81) August 2018 (105) July 2018 (114) June 2018 (100) May 2018 (129) April 2018 (155) March 2018 (175) February 2018 (171) January 2018 (195) December 2017 (212) November 2017 (163) October 2017 (201) September 2017 (214) August 2017 (258) July 2017 (172) June 2017 (214) May 2017 (223) April 2017 (240) March 2017 (149) February 2017 (239) January 2017 (295) December 2016 (271) November 2016 (257) October 2016 (233) September 2016 (216) August 2016 (217) July 2016 (220) June 2016 (226) May 2016 (254) April 2016 (226) March 2016 (235) February 2016 (209) January 2016 (240) December 2015 (174) November 2015 (219) October 2015 (218) September 2015 (215) August 2015 (223) July 2015 (206) June 2015 (201) May 2015 (218) April 2015 (214) March 2015 (229) February 2015 (199) January 2015 (215) December 2014 (225) November 2014 (236) October 2014 (212) September 2014 (217) August 2014 (229) July 2014 (225) June 2014 (243) May 2014 (236) April 2014 (236) March 2014 (188) February 2014 (148) January 2014 (174) December 2013 (173) November 2013 (176) October 2013 (178) September 2013 (168) August 2013 (140) July 2013 (117) June 2013 (110) May 2013 (147) April 2013 (132) March 2013 (154) February 2013 (154) January 2013 (142) December 2012 (83) November 2012 (117) October 2012 (162) September 2012 (101) August 2012 (172) July 2012 (213) June 2012 (82) May 2012 (56) April 2012 (48) March 2012 (74) February 2012 (46) January 2012 (46) December 2011 (61) November 2011 (80) October 2011 (58) September 2011 (48) August 2011 (117) July 2011 (149) June 2011 (137) May 2011 (80)
Xildhibaan Siciid Cartan Oo Ka Dayriyay Xaaladda Dalku Marayo, Madaxweynahana Ugu Baaqay Inuu Ka Jawaabo Socdaalka Gaas September 22, 2018
Gefaf ka Diineed ee Xeerka Kufsiga Somaliland September 22, 2018
Xeerka Kufsiga Somaliland: Fasiraada Xeeleysan Iyo Bohasha Lagu Wado September 22, 2018
Dugsi Ardayad Keliya Albaabada U Furay, Si Aanu U Lumin Xaqii Ay Dawladdeeda Ugu Lahayd Waxbarashada September 22, 2018